DAAWO SAWIRADA: Wafdigi dowlada Federaalka ee Booqday Xadka Somalia & Kenya oo Soo Saaray Afar qodob, – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDAAWO SAWIRADA: Wafdigi dowlada Federaalka ee Booqday Xadka Somalia & Kenya oo Soo Saaray Afar qodob,
DAAWO SAWIRADA: Wafdigi dowlada Federaalka ee Booqday Xadka Somalia & Kenya oo Soo Saaray Afar qodob,
Wafdi uu hoggaaminayo wasiirka Difaaca Somalia, C/qaadir Sheekh Cali Diini oo booqday degmooyinka Doolow iyo Balad-xaawo oo kawada tirsan gobolka Gedo, ayaa ka warbixiyay maanta wixii ay kusoo arkeen Xadka u dhexeeya Somalia iyo Kenya.
Xubnaha wafdiga ayaa ka koobnaa; guddiyada difaaca, arrimaha dibadda, arrimaha gudaha ee baarlamaanka Somalia, guddigga madaxa-banaan ee xuduudaha iyo federaalka, saraakiil iyo khubaro, xubno ka socday maamulka Jubbaland oo isugu jira wasiirro iyo xildhibaanno ayaa labada maalmood waxay u kuur-galayeen xaalada dhabta ah ee ka jirta deegaanka iyo cabashooyin ka soo yeeray shacabka magaalada Beled-xaawo.
Socdaalka kaddib, waxay wafdigu soo saareen qodobadan:
In darbi la dhisay aanu noo muuqan.
2. Inaanay noo muuqan calaamad xuduudeed la bedelay.
3. In la qoday god aan ku qiyaasnay 1.6-mitir oo dhinaca Kenya ku yaalla oo u jira 6-mitir calaamadda xuduudda noo ah, godkaasoo dhererkiisu yahay ilaa 700-mitir.
4. Waxaan Buulo-Xaawo dusheeda ku aragnay waddo la xaaray oo baldoosyo la mariyay.
Wasiirka Gaashaandhigga Somalia, Jen. C/qaadir Diini ayaa socdaalka kaddib uga mahad-celiyey shacabka degmooyinka Doolow iyo Beled-xaawo dareenkooda wadaninnimo, isla markaana xusay in shacabka iyo dawladda Somalia aysan marnaba aqbali karin cid walba oo ku xad-gudbaysa dalkeenna.
“Waxaa si dhab ah kormeer buuxa ugu soo sameynay meelihii la inoogu sheegay in isbadal lagu sameeyey ee xadka labada dal, waxaan soo ogaannay xaqiiqada meesha taalla, inagoo runtii qaadanay feker fiican iyo aragti ururin aan dib ugula noqonayno dawladda dhexe iyo cida ay khuuseyso arrintan,” ayuu yiri Diini.
Ugu dambeyn, wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka gaashaandhigga Somalia ayaa dib ugu soo laabtay Muqdisho gellinkii dambe ee maanta, waxayna la wadaagi doonaan madaxda sare dalka wax walba oo ay kusoo arkeen deegaannadii ay soo booqdeen.
Ra’iisal wasaraha Soomaliya oo Baydhabo kula shiraya Odayasha iyo waxgaradka Gobolka Bay,
DAAWO SAWIRADA: Safaradii Soomalia ee Washington oo dib loo furay 25 Sano kadib,